အစီအစဉ်များ | November 2019
ဘတ္တ (Boutler) တွင်တစ်ဦး bootable USB drive ကို Creating
မနေ့ကယခင်ကမကြားဘူးသော Multi-flash drive ကိုဘတ္, ဖန်တီးဖို့ program တစ်ခုအပေါ်သို့လဲ။ နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း 2.4 ကို Download လုပ်ပါ, ထိုသို့ကြိုးစား, ဒါကြောင့်အဘယ်သို့သောအခြင်းနှင့်အကြောင်းရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ Windows, Linux LiveCD နှင့်အခြားသူများ - အဆိုပါအစီအစဉ်နီးပါးဆိုက ISO ၏ပုံရိပ်များကိုအစုတခုကနေ multiboot က USB flash drive ကိုဖန်တီးနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
Mp3, ကယ်ဖို့ Download lame_enc.dll အဘယ်မှာရှိ
သငျသညျ Audacity 2.0.5 သို့မဟုတ်အခြားဗားရှင်း lame_enc.dll ဖို့လိုအပ်ပါလျှင်အောက်တွင် - ၎င်း၏တပ်ဆင်ခ၏အောက်ပါဖော်ပြချက်နှင့်အတူတစ် codec-pack ကိုများနှင့်သီးခြားဖိုင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အခမဲ့ခြေဆွံ့ codec ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နည်းလမ်းနှစ်ခု။ ဆမ် lame_enc.dll ဖိုင်တစ် codec (ကြောင်းကိုဝိဉာဉ်-ဒီကုဒ်ဒါ) သည်မဟုတ်, သာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, MP3 မှအသံကုဒ်သွင်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်, အရှင်, ကသာအများဆုံးကို formats play ကြောင်းသေချာစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ, အပေါငျးတို့သအစုံအတွက်လက်ရှိမဖွစျစခွေငျးငှါ - အဘို့ ထိုကြောင့်, တစ်ခုက Audacity နဲ့ audio ဝှက်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများမပါဝင်ပါဘူးအခြားအစီအစဉ်များ lame_enc ဖိုင်ကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျ (ဖြစ်ကောင်း, သင် Skype ကိုမှမသွားနိုင်, အတူ), Skype ကိုအတွက်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ကြည့်ရှုရန်သီးခြားဖိုင်ထဲမှာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သို့မဟုတ်အခြားအကောင့် Skype ကိုကလွှဲပြောင်းတစ်ဦးလိုအပ်ရှိပါကနေရာလေးကိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ SkypeContactsView အတွက်လာ။ အဘယ်ကြောင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့မလဲ ဥပမာအားဖြင့်မဟုတ်, ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မအချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက် Skype ကိုပိတ်ဆို့ပြီ, ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူရှည်လျားစာပေးစာယူကိုကူညီမကျွန်တော်တစ်ဦး account အသစ်ကိုစတင်ပါနှင့် re-တည်ထောင်ရန်အဆက်အသွယ်တစ်လမ်းများအတွက်ရှာဖွေရန်နှင့်သူတို့ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကြရတယ်။
ဘယ်လိုတရားစကားတော် (DOC နှင့် DOCX) အား PDF ဖိုင်ပြောင်း
ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့က၎င်း၏အခမဲ့တည်းဖြတ်ရေးပုံစံများအတွက်စကားလုံးစာရွက်စာတမ်းမှ PDF ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးအများအပြားနည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်: ပြောင်းအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်အထူးအစီအစဉ်ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များမှအဆင်ပြေအောင်။ သငျသညျ Office 2013 ကို (သို့မဟုတ်တိုးချဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Office 365 ကိုနေအိမ်) ကိုအသုံးပြုနေလျှင်အပြင်, ကတည်းဖြတ်များအတွက် PDF files တွေကိုဖွင့်လှစ်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးသား default အနေဖြင့်ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်ပါရှိသည်။
သင့်ရဲ့ iPhone နှင့် Android များအတွက်ဖုန်းမြည်သံစေရန်မည်သို့လွယ်ကူပါတယ်
အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြု. : ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်တို့၏ iPhone နှင့် Android-smartphone ကိုများအတွက်ဖုန်းမြည်သံအောင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ (နှင့်သူတို့ခက်ခဲမဟုတ်) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည်, သင်တန်း, အသံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဘို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆော့ဖျဝဲ၏အကူအညီနှင့်အတူ။ ဤဆောင်းပါးသည်ကိုပြောပြနှင့်အခမဲ့ပရိုဂရမ် AVGO အခမဲ့ Ringtone Maker တွင်တစ်ဦးဖုန်းမြည်သံအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
CCleaner ကို5download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်
အတော်များများကသင့်ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးဖို့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ CCleaner ကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြပြီး, lo, တကဗားရှင်းသစ်သို့ရောက်လာသည် - အစောပိုင်းက CCleaner ကို 5. တရားဝင် website ကိုယခုအရာရှိတဦးနောက်ဆုံးဖြန့်ချိမယ့်တစ်ဦးအသစ်အဆန်းတစ်ခု beta ကိုဗားရှင်းမရရှိနိုင်ခဲ့။ ပရိုဂရမ်နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၏နိယာမ၏အနှစ်သာရပြောင်းလဲသွားမလာကြပါက startup တစ်ခုသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းတဲ့အတွက် Windows Registry ကိုကနေအစီအစဉ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ, ယာယီဖိုင်တွေကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးကိုကူညီစနစ်ပိုကောင်းအောင်အားလုံးကိုအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။
Sardu - multiboot ချောင်းကိုသို့မဟုတ် disk ကိုဖန်တီးရန်အစွမ်းထက် tool ကို
ငါတတိယကွဲပြားခြားနားအနည်းငယ်အလုပ်လုပ်ရုံကမည်သည့်က ISO image ကိုဖြည့်စွက်အားဖြင့်တစ်ဦး multiboot ချောင်းကိုအတွက်ယင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် - WinSetupFromUSB ။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်မတူရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှု Sardu အစီအစဉ်အတွက်အခမဲ့တွေ့ရှိခဲ့နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးက Easy2Boot ထက်သုံးစွဲဖို့ကပိုလွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်ရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft Office 2016 မှအဆင့်မြှင့်
Windows အတွက်မနေ့ကရုရှားဗားရှင်းရုံး 2016 ဖြန့်ချိ, သင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Office 365 (သို့မဟုတ်အခမဲ့အစမ်းကြည့်ဖို့လိုခငျြ) ကို subscribe လျှင်, သင်အခုဗားရှင်းအသစ်မှ upgrade လုပ်ဖို့ option ရှိသည်။ အတူတူစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်, Mac OS X ကိုအသုံးပြုသူများသည်လည်းဤ (ထိုသူတို့အဘို့ဗားရှင်းသစ်ကိုအနည်းငယ်အစောပိုင်းကထွက်လာသ) ပြုပါလိမ့်မည်။
တစ်ခုက ISO image ကိုနေ bootable USB flash drive ကိုအောင်လုပ်နည်း
သငျသညျ, ဘယ် operating system (Windows, Linux နှင့်အခြားသူများ) ၏ဖြန့်ဖြူးမှတျတမျးတငျထားသောက ISO format နဲ့ LiveCD ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး, Window PE, ဒါမှမဟုတ်သင်က bootable USB flash drive ကိုလုပ်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့ကနေအခြားအရာတစ်ခုခုတဲ့ disk ကိုပုံရိပ်ရှိပါက, ထို့နောက် ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာသင်သည်သူတို့၏အစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်နည်းလမ်းများစွာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်မြင့်အိမ်ကရုံး 365 subscriptions ကိုအတွက်နယူးအင်္ဂါရပ်များ
အစောပိုင်းကငါရုံး 2013 ခုနှစ်နှင့်အိမ်များအတွက် 365 အကြောင်းကိုဆောင်းပါးစုံတွဲတစ်တွဲကိုရေး ထား. ဤဆောင်းပါးကိုနှစ်ခုဗားရှင်းအကြားခြားနားချက်ကိုတွေ့မြင်နှင့် Office 365 ကိုတစ်ဦး subscription ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကအသစ်နှင့်အသုံးပြုသူဖော်ရွေအင်္ဂါရပ်များအကြောင်းသင်ပြောပြဘူးသောသူတို့အဘို့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအကျဉ်းချုပ်: ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဤအချက်အလက်ပင် Office 365 ကိုနေအိမ်များအတွက်လိုင်စင်အခမဲ့ချီတက်ရရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
အဆိုပါ bootable USB flash drive ကိုသို့မဟုတ် ISO စစ်ဆေးလုပ်နည်း
ကျွန်မမကြာခဏ Boot တက် drives တွေကိုဖန်တီးညွှန်ကြားချက်ရေးထားပြီ, ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်ဟာ bootable USB flash drive ကိုဒါမှမဟုတ် image ကိုက ISO ကိုစမ်းသပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်,, BIOS setting များကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် virtual machine ကိုစိတ်ကြိုက်မပါဘဲပြုလုပ်တင်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ တစ်ဦး bootable USB drive ကိုဖန်တီးဖို့အခြို့သော utility ကိုနောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးခြင်းများအတွက် tools တွေကို USB flash drive ကိုမှတျတမျးတငျထားနှင့်များသောအားဖြင့် Qemu အပေါ်အခြေခံထားတယ်ပါဝင်သည်။
BetterDesktopTool သုံးပြီး Windows တွင်အကွိမျမြားစှာ desktops တွေနဲ့
တစ်ဦးကအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မ Windows တွင်အများအပြားစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုသုံးစွဲဖို့အစီအစဉ်များအချို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ အခုတော့ငါသည်သင်တို့အဘို့အသစ်ကိုတစ်ခုခုရှာတွေ့ - တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြချက်အနေဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းသောတာဝန်ခံအခမဲ့ (က paid version လည်းဖြစ်ပါတယ်) အစီအစဉ် BetterDesktopTool, Windows ကိုမှ, Mac OS X ကိုအတွက် Spaces ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနှင့်မစ်ရှင်ထိန်းချုပ်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော။
တကယ်တော့တစ်ဦး bootable USB drive က Acronis True Image တို့ကိုထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး, disk ညွှန်ကြားရေးမှူး (အတူတူပင် drive ကိုနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နှစ်ဦးစလုံးအစီအစဉ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှစ်ဦးစလုံး, နိုင်ပါတယ်), လိုအပျသမြှသောကြောင့်ထုတ်ကုန်သူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ဒီဥပမာ True Image တို့ 2014 ခုနှစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှတျတမျးတငျထားနှင့် Disk ကိုဒါရိုက်တာ 11 ပါလိမ့်မည်သည့်အပေါ်တစ်ဦး bootable USB flash drive ကို Acronis (စကားမစပ်, ထိုနည်းတူသင်က ISO ဖန်တီး, ပြီးတော့ disc ကိုမှမီးရှို့နိုငျသညျ) အောင်ဘယ်လိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယိုကဒ်အပူချိန်ဖြစ်ပါသည် - အစီအစဉ်ကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို, ပုံမှန်တန်ဖိုးများ
ဤဆောင်းပါး၌အချို့ဆော့ဖျဝဲ၏အကူအညီနှင့်အတူကအဘယ်အရာကိုပုံမှန်လည်ပတ်မှုတန်ဖိုးနှင့်အပူချိန်ဟာလုံခြုံအထက်တွင်လျှင်ဘာလုပ်၏အနည်းငယ်ထိတွေ့ထွက်ရှာရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုအမည်ရသောရဲ့ဗီဒီယိုကဒ်၏အပူချိန်အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အစီအစဉ်များကိုအောက်တွင်ပေးထားသောအချက်အလက်များ Nvidia GeForce ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပိုင်ရှင်များမှအသုံးဝင်သောအဖြစ် GPU ကို ATI / AMD ၏ရှိသူများဖြစ်လိမ့်မည်ကို Windows 10, 8 နဲ့ Windows7အပေါ်အညီအမျှကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Skype ကိုသင်မသိသောကြောင့် features
အတော်များများကလူအတော်များများဆက်သွယ်ဖို့ Skype ကို အသုံးပြု. ရသည်။ သငျသညျမယျဆိုရငျ - သေချာသင် Skype ကို၏မှတ်ပုံတင်နှင့်တပ်ဆင်ခပေါ်မှာရှိသမျှလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရစေပါကဒီမှာတရားဝင် website နှင့်ကျွန်မအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တို့ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်: ဘယ်လို install လုပ်စရာမလိုဘဲအွန်လိုင်း Skype ကိုသုံးပါရန်။
ABBYY FineReader, ခြော, ထိုကဲ့သို့သောရုရှားတွင် software နှင့်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအကြားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် - က scan ဖတ်စာသား (OCR, Optical Character အသိအမှတ်ပြု) အသိအမှတ်ပြုရန်အစီအစဉ်များမှကြွလာသောအခါစည်းကမ်းအတိုင်း, လူအများစုသာထုတ်ကုန်သတိရပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - "Instagram တွင်" သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ
ရန်အမျိုးမျိုးသောရိုးရှင်းပြီးအခမဲ့အစီအစဉ်များ၏ဖော်ပြချက်အတွင်းမှာပဲ "ကောင်းတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုဖြစ်စေလျက်," လာမယ့်တဦးတည်းကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ် - ကွန်ပျူတာထဲမှာ (သို့မဟုတ်သင်ဓါတ်ပုံသက်ရောက်မှုလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုတော်မူသောကြောင့်အနည်းဆုံးကြောင်းအစိတ်အပိုင်း) ပေါ်တွင်သင်၏ Instagram ကိုအစားထိုးရန်တံ့သောစုံလငျအကျိုးသက်ရောက်မှု 8, ။ (တစ်ဦးချင်းစီကဒုတိယ Photoshop ကိုရှိပါတယ်သော်လည်း) အများစုမှာပုံမှန်အသုံးပြုသူများအခါးဆစ်နဲ့ Full-စုံတဲ့ပုံရိပ်အယ်ဒီတာ, အဆင့်ဆင့်, အလွှာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောရောစပ် Algorithms အနေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ tool ကိုအသုံးပြုခြင်း, သို့မဟုတ်မဆို "အွန်လိုင်း Photoshop ကို" ကောင်းစွာဖြောင့်မတ်စေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်။
Mobogenie - အစီအစဉ်ကိုဘယ်လို
တပ်နှစ်ဦးကိုအဖွဲ့ဝင်များ: အချို့ရှိရာ, ရုရှအတွက် mobogenie အခြားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရှာဖွေနေ - သူ့ဟာသူထငျရှားသောအစီအစဉ်၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကို, သိရန်လိုသည်, သင်၏ကွန်ပျူတာကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ Mobogenie ဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့နှင့် ယူ. သည်အဘယ်မှာရှိ - သငျဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်ယင်းအစီအစဉ်ကိုယူနိုင်သောနေရာက Windows နဲ့ Android နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် Mobogenie, သောအရာကို၏ပထမဦးဆုံးပိုငျးတှငျ: ဤဆောင်းပါး၌ငါနှင့်အခြားနှစ်ဦးစလုံးထူးမည် သငျသညျမတပ်ဆင်ရသေးလျှင်။
Disk Analyzer - CCleaner ကို 5.0.1 အတွက် tool အသစ်
မကြာသေးမီကငါ CCleaner ကို5နှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားခဲ့သည် - ကွန်ပျူတာထဲမှာရှင်းလင်းဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်း၏ဗားရှင်းအသစ်။ ယခုဖက်ရှင်ပြားချပ်ချပ် interface နဲ့ browser ကိုအတွက် plug-in များနှင့် extension များစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း: တကယ်တော့သစ်ကိုကဒါအများကြီးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သငျသညျဒေသခံ hard drive တွေနဲ့ external drive တွေကိုရဲ့ contents ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လိုအပ်ပါကသူတို့ကိုရှင်းလင်းနိုင်သည့်နှင့်အတူ Disk ကို Analyzer, - မကြာသေးမီကဖြန့်ချိ update ကို CCleaner ကို tool ကိုရှေ့မှာမဟုတ်ခဲ့သောသည်ထင်ရှား 5.0.1 ။
ဝေးလံခေါင်သီ desktop ကို access များအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲထွန်းကားမီနှင့်ကွန်ပျူတာ (အဖြစ်လက်ခံနိုင်သောမြန်နှုန်းမှာပြုကွန်ရက်များ) ကိုထိန်းချုပ်ရန်, တစ်ခုခုရှင်းပြဖို့ဒါမှမဟုတ်ဘာထွက်ရှာရန်သင့်ကွန်ပျူတာနှင့်အတူကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုမှုများ၏များသောအားဖြင့်အဓိပ်ပာနာရီပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီ နေဆဲကကွန်ပျူတာနှင့်အတူသွားနေသည်။